नेपाल आज | सत्ता जोगाउन केपी ओलीले राजासँग पनि हात मिलाउन सक्छन् !
समाचार राजनीति भिडियो
सत्ता जोगाउन केपी ओलीले राजासँग पनि हात मिलाउन सक्छन् !
बिहिबार, २३ पुष २०७७ गते प्रकाशित - नेपाल आज
विवेकशील साझा पार्टीको ललितपुर जिल्ला संयोजक उज्वलकृष्ण श्रेष्ठले सत्ता जोगाउन केपी शर्मा ओलीले राजासँग पनि हात मिलाउन सक्ने आशंका गरेका छन् । नेपालका राजनीतिक नेता सत्तामा कसरी पुग्ने र चुनाव कसरी जित्ने भन्ने कुरामा पारंगत रहेको टिप्पणी गरेका उनले सत्ता स्वार्थका लागि नेताहरु जो सँग पनि मिल्न सक्ने वताए ।
नेपाल आजसँगको विशेष कुराकानीमा वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दै उनले भने–‘कांग्रेस होस वा कम्युनिष्ट, वहाँहरुसँग देश कसरी विकाश गर्ने भन्ने ज्ञान कम छ। तर, सत्तामा कसरी पुग्ने/चुनाव कसरी जित्ने भन्ने कुरामा निपुर्ण हुनु हुन्छ। वहाँहरु स्वार्थका लागि जो सँग पनि मिल्न सक्नु हुन्छ।’
जनताले विस्वास गरे दिएको वहुमतलाई नेकपाले जोगाउन नसकेको वताएका श्रेष्ठले दुई वर्ष नपुग्दै पार्टीमा समस्या आउनु भनेको स्वार्थ नै प्रमुख कारण भएको वताए । ‘भन्नत नराम्रो नवोलौ जस्तो लाग्छ । तर, कहिले काहीँ त कुकुरलाई घ्यु नपचे जस्तो लाग्छ मलाई’ उनले भने–‘झण्डै दुई तिहाईको सरकारले केहि गर्न नसक्नुले उनीहरु सुशासनका लागि होईन, सत्ताको लुछाचुडिका लागि मात्रै रछ भन्ने त पुष्टि नै भयो नी।’
कांग्रेस र कम्युनिष्टको नियत नै पद र पैसा प्राप्तीमा केन्द्रित रहेको वताएका श्रेष्ठले भने–‘उनीहरुको नियतनै त्यहि हो। जे भई रहेको छ, त्यो हुने नै हो। यसका कमेन्ट गर्नु ठिक छैन ।’ प्रचण्ड–माधव र केपी ओली दुवै पक्ष अससफ भएको वताएका उनले तर, असफलतको सवै भन्दा ठुलो दोसी प्रचण्ड माधव भएको टिप्पणी गरे । ‘प्रचण्ड–माधव मिलेर अघि वढ्न सकेनन्। ओलीलाई फेल गराउने पनि माधव–प्रचण्ड नै हुन’ उनले थपे–‘यस अर्थमा ओली अरु भन्दा केहि ठिक जस्तो लाग्छ। तर, प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रकृया र अन्य केहि कुरामा चाहि हामी वहाँको विपक्षमा छौं ।’
नेकपाले विकास निर्माण र जनताको समृद्धि भन्दा पनि आसेपासे र कार्यकर्ता मोटाउने काममा मात्रै ध्यान दिएकोमा उनको असन्तुष्टि ब्यक्त गरे। ‘उनीहरुले विकास निर्माण भन्दा पनि आफनै कार्यकर्ता/आफनै टोली भित्र रहेर सरकारलाई घर जस्तो चलाए’ श्रेष्ठले भने–‘दुई तिहाईको सरकारले देशलाई गति दिन नसन्नु भनेको सानो चित्त भएर नै हो। उनीहरु सफल हुन सकेनन्।’
देशमा जनताभन्दा वढि कार्यकर्ता भएकाले पनि नेताहरु त्यसै घेरामा रमाएको उनको भनाई छ । ‘कांग्रेस हुन वा कम्युनिष्ट, कुनै पनि पार्टीका नेताहरुले जनता देखेकै छैनन्’ उनी भन्छन्–‘कार्यकर्तालाई ठिक भए ठिक, अरुलाई चै पेलेर जाने मानसिक्ता देखिन्छ।’ नेताहरुमा ब्यक्तिगत स्वार्थ, पद र पैसाका लागि राजा/महाराजा जस्तो धम्क्याउने, थर्काउने लगायतका गलत प्रवृत्ति हावी भएको पनि उनले वताए । ‘राजाको समयमा पनि धम्क्याउने प्रचलन थियो। अहिले त राजा हटाएर अर्को राजा आए जस्तै भयो’ उनले भने–‘लोकतन्त्रमा कसैलाई धम्क्याएर हुँदैन। समान दृष्टिकोण हुनु पर्छ ।
नेताहरुमा राजनीतिक संस्कार नभएको र उनीहरुले देशलाई गति दिन सक्दैनन भन्ने लागेरै वैकल्पीक शक्तिको रुपमा विवेकशील साझा पार्टी अगाडि आएको उनले वताए । ‘तीन वर्ष अघि म कुनै पार्टीमा थिईन। विसुद्ध ब्यापारी थिए। राजनीतिवाट टाढा हुन खोज्थे । आज नेता जस्तो भएको छु’ उनी भन्छन्–‘उनीहरुले देशमा शुसासन ल्याएको भए र विकास गरेको भए अन्य पेशाको मान्छे राजनितिमा आउनु पर्ने थिएन। यीनीहरुले देशलार्य सहि ठाउँमा लाँदैनन् भन्ने भएरै हामी राजनीतिमा आउनु पर्यो ।’ आफुलाई राजनीतीमा तेती ज्ञान नभएपनि अहिलेका नेताभन्दा इमान्दार र सहि तरिकाले देश हाँक्न सक्ने आत्म विश्सास भएको पनि उनले वताए ।
‘तपाईहरुमा पनि फुट्ने/जुट्ने समस्या देखियो। कांग्रेस/एमाले र विवेकशिल साझामा अन्तर के भो ?’ भन्ने प्रश्नमा आवश्यक तयारी नगरीकन भएको एकिकरणले सामान्य समस्या ल्याएपनि अव भने विवेकशील साझा जनताको विचमा अटल भएर रहने दावी गरे । ‘त्यो वेला आवश्यक गृहकार्य नगरी दुईटा पार्टी जुट्यो। तर, राम्रो केहि मान्छे मिल्न नचाहने पनि थिए । त्यसैले हामी छुट्टियौं। अहिले चै सवै प्रकृया पुरा गरेर जुटेका छौं। अव छुट्दैन’ उनले भने–‘हामी निष्ठाको राजनीति गर्छौ । अघिल्लो चुनावमा हामीलाई जनताले विस्वास गर्न सक्नु भएन। तर, चुनाव जित्नमात्रै ठुलो कुरा होईन। हाम्रो सिद्धान्त भनेको सुशासन हो। हाम्रो कारणले कांग्रेस कम्युनिष्टलाई झक्झक्याउने काम भईरहेकै छ।’
राजा होईन, विवेकशिल साझा
पछिल्लो समय राजाका पक्षमा भईरहेका प्रदर्शनहरुलाई श्रेष्ठले सामान्य रुपमा लिएका छने । नेताहरुको गैरजिम्मेवारी, भ्रष्टाचार, अराजकताले यो अवस्था ल्याएको उनको वुझाई छ । ‘हिजो राजतन्त्र थियो–एउटा राजा थिए। आज कांग्रेस कम्युनिष्ट छन्– हजारौं राजा भए’ उनले थपे–‘जताततै भ्रष्टाचार छ, नेताहरु जसरी पनि कमाउ भन्ने अभियानमा छन्। राजाको समयमा पर्याप्त विकास नभए पनि विनास भएको थिएन। त्यसैले जनतामा हजारौं राजा भन्दा एउटा राजा ठिक भन्ने भावना विकास हुँदै गएको हो ।
अहिलेका नेतामा संस्कार नै नभएको वताएका उनले नेताहरुले पद र पैसा भन्दा केहि नहेरेको वताए । देशको समग्र अवस्था देखेर दलमाथि सर्वसाधारणको विस्वास घट्दै गएको ‘वरु राजा नै ठिक’ भन्नेको संख्या वढ्दै गएको उनको भनाई छ । ‘तर, उनीहरु पनि भ्रममा छन्। अहिले विकल्प छ, राजावादीले पनि हामीसँग सहकार्य गर्न सक्छन्’ उनले भने–‘हामीले केहि भ्रष्टार गरेको छैन। देशको अग्रगतिका लागि हामी विकल्प हौं । त्यसैले अव राजा होईन, विवेकशिल साझा रोजाई हुनुपर्छ ।’
विवेकशील साझा पार्टीका ललितपुर जिल्ला संयोजक उज्वलकृष्ण श्रेष्ठसँग नेपाल आजले गरेको विशेष कुराकानी हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला।
भारतले नेपाललाई दिने १० लाख मात्रा खोप विहिवारै नेपाल आउने
संसद विघटनको निर्णयले ‘कु’ भयो भन्नु निरर्थक: कमल थापा
सामाजिक सञ्जालमा अश्लिल भिडियो/फोटो पठाउने एक युवक पक्राउ
२ थान कटुवा पेस्तोसहित १ जना पक्राउ